Idaacadda Reer Spain Cadena COPE Oo Kashiftay Jawaabtii Uu Cristiano Ronaldo Siiyay Zinedine Zidane – Ma Aqbalay Joogitaan? - Laacib.net
Idaacadda Reer Spain Cadena COPE Oo Kashiftay Jawaabtii Uu Cristiano Ronaldo Siiyay Zinedine Zidane – Ma Aqbalay Joogitaan?
Cristiano Ronaldo ayaa si adag ula hadlay macalinkiisa Zinedine Zidane isagoo u sheegay in loola dhaqmay sidii dambiilahii xilli ay wali sii socdaan wararka xanta ah ee cirka galinaya mustaqbalkiisa Real Madrid.
Ronaldo ayaa lagu soo eedeeyay inuu khiyaamay lacag canshuur dhan 14.7 Malyan oo Euro, balse sida muuqata wuxuu qaatay go’aan aan ka laabasho laheyn taasoo ah inuu isaga tagayo xagaagan Real Madrid.
Warbaahinta Spain ayaa shalay qortay in Zidane uu taleefoonka ka wacay Cristiano Ronaldo si uu isugu dayo ugu yaraan inuu ku celiyo caasimadda Spain xilli xidigaan uu ku sugan yahay Russia isagoo ka qeyb galaya koobka Confederation Cup.
Balse idaacadda Codena COPE ayaa shaacisay in Ronaldo uu jawaab lama filaan ah siiyay Zidane isla markaana uu u sheegay in loola dhaqmay sidii dambillihii taasna ay ka dambeysay inuu gaaro go’aankaan.
“Intaan joogay Spain waxaa la iila dhaqmay sida dambiilahii. waxaana bilaabay saxaafadda” ayuu u sheegay Ronaldo macalinka reer France.
Ciyaariyahankii hore Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inuu la hadlay wakiilkiisa Jorge Mendes kuna amray inuu ka shaqeeyo sidii uu dib ugu laaban lahaa garoonka Old Trafford.
Madaxa fulinta Manchester United Ed Woodward wuxuu diyaar la yahay 175 Malyan oo Pound iyo David De Gea si ay caasimadda Spain uga soo wadaan Ronaldo.
Ronaldo isagoo 18-jir ah ayuu 2003 kusoo biiray Man United wuxuuna ka tagay isagoo 24-jir ah sanadkii 2009, haatanna waa 32-jir u sharaxan inuu markii shanaad hanto abaalmarinta Ballon d’Or.
Mudadiisa Red Devils wuxuu dhaliyay 118-gool, 292-kulan oo uu ciyaaray.